Email Kushambadzira Stats Iwe Unofanira Kuziva | Martech Zone
Ini handina chokwadi chega chega email yekushambadza manhamba pano yakakosha kune yako email kushambadzira, asi mashoma acho anonyatso kumira kwandiri
Email Kushambadzira Revenue zvinoshamisa kushomeka uye kushoma kushandiswa. Ini ndinogara ndichishamiswa pane yedu yega blog iyo yemusoro kushambadza inogara ichitengesa kunze… asi hapana munhu akatenga kushambadza pane yedu yezuva nezuva uye yevhiki tsamba tsamba iyo inosvika vanopfuura 75,000 vanyori vhiki rega rega.
Email Kugamuchirwa iri pakakwirira, ne 95% yevatengi vachiongorora email yavo kamwe chete pazuva! Kana iwe usiri kutumira mameseji mameseji ekuwana, ekuchengetedza uye upsell nzira dzeako tarisiro uye vatengi ... urikushaya!
Nharembozha Yekushandisa iri kuwedzerawo! 64% yeavo vanoita zvisarudzo vanoverenga maemail kuburikidza nharembozha. Maemail ako anoteerera kune nhare mbozha uye nyore kuverenga Ndichiri kushamisika kuti mangani makuru mabhendi anonditumira maemail andisingakwanise kuverenga pane yangu mbozhanhare. Nguva zhinji ndakabatikana zvekuti ndinongozvidzima pane kumirira kudzamara ndadzokera kudesktop kuti ndidziverenge.
Zvichida metric yakakosha pane zvese ndeyekuti pamadhora ese 1 anoshandiswa pamaemail ekushambadzira eemail, $ 44.25 ndiyo avhareji yekudzoka paemail kushambadzira investments. Iko kudzoka kune inivhesitimendi izvo zvakanyanya kusingakundike kuburikidza nedzimwe nzira dzekutengesa uye marongero.
Infographic na Kuona.
Tags: email dhizainiEmail Marketingemail kushambadza statsemail kuverengaemail statsnharembozha emailnhare inopindura emailinoteerera email
Chiratidzo: Kura neemail, Chinyorwa, Zvemagariro uye Sweepstakes